Social Media Obodo | Martech Zone
Saturday, October 9, 2010 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Anyị niile nwere ha - onye ọjọọ na-ada ụda ma na-eme mkpọtụ n'ihe niile ị na - ekwu - na-ewe ndị ọbịa gị ndị ọzọ iwe ma na-ewepụta iwe. Ọ bụ ezigbo nrụgide, mana enwere ụzọ iji gbochie ajọ omume mgbasa ozi ọha na eze. Nke a bụ nnukwu infographic nke Search Engine Journal wepụtara dabere na 8 Obodo nke Social Media.
N'ezie, enwere ụfọdụ ihe nzuzu n'eziokwu na SEJ nwetara onye nkwado na Infographic… nwere obi ụtọ maka ha njikọ ha na-eweta abụghị nke onye nkwado, ma ọ bụghị na ha ga-emebi otu n'ime profaịlụ nke ha!
Nlekọta Nlekọta Egwuregwu Social Media